နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ်၏ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးကိုယ်စားလှယ်နှင့် ဩစတြေးလျနိုင်ငံအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် ပစိဖိတ်ရေးရာဝန်ကြီး အထက်လွှတ်တော်အမတ်တို့အား သီးခြားစီလက်ခံတွေ့ဆုံ | NLD
Home Appointment နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ်၏ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးကိုယ်စားလှယ်နှင့် ဩစတြေးလျနိုင်ငံအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် ပစိဖိတ်ရေးရာဝန်ကြီး အထက်လွှတ်တော်အမတ်တို့အား သီးခြားစီလက်ခံတွေ့ဆုံ
နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ်၏ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးကိုယ်စားလှယ်နှင့် ဩစတြေးလျနိုင်ငံအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် ပစိဖိတ်ရေးရာဝန်ကြီး အထက်လွှတ်တော်အမတ်တို့အား သီးခြားစီလက်ခံတွေ့ဆုံ
Posted By: mygate wayon: ဇှနျ 14, 2018 In: AppointmentNo Comments
နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ်၏ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးကိုယ်စားလှယ် Ms. Christine Schraner Burgener အား ယနေ့နံနက် ၁၀ နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာန၌ လက်ခံ တွေ့ဆုံသည်။
ထိုသို့ တွေ့ဆုံစဉ် နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နှင့် အထူးကိုယ်စား လှယ်တို့သည် ရခိုင်ပြည်နယ်အရေး အပါအဝင် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရင်ဆိုင်နေရသော စိန်ခေါ်မှုများကို ဖြေရှင်းရေးတွင် မြန်မာအစိုးရနှင့် ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူး ချုပ်၏ အထူးကိုယ်စားလှယ်ရုံးတို့အကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ၊ အမျိုးသား ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်တို့နှင့် စပ်လျဉ်း၍ မြန်မာ အစိုးရ၏ ကြိုးပမ်း အားထုတ်မှုများအပေါ် အမြင်ချင်းဖလှယ်ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
ထို့နောက် အထူးကိုယ်စားလှယ်က ခရီးစဉ်လာရောက်ခြင်းမှာ ရခိုင်ပြည်နယ် ကိစ္စ ဖြေရှင်းရေးတွင် မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ကုလသမဂ္ဂအကြား အပြုသဘောဆောင်သည့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ တိုးမြှင့်နိုင်ရန်အတွက် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးရန် ဖြစ်ကြောင်း၊ အသိုက်အဝန်းနှစ်ခု အား ပိုမိုနီးကပ်လာစေရန်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တို့အား အထောက်အကူပြုရန် ဖြစ်ကြောင်းပြောကြား သည်။
ယင်းနောက် နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်က မြေပြင်အခြေအနေနှင့် နက်နဲရှုပ်​ထွေးမှုများ၏ ပကတိအခြေအနေများကို သိရှိနားလည်ပြီး အမှန်တရား ဘက်မှ ရပ်တည်ရန် အခြေအနေမှန်များကို နိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းက သိရှိနိုင် စေရန်အတွက် ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရန် လိုအပ်ကြောင်း၊ အထူးကိုယ်စားလှယ်အနေ ဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ကုလသမဂ္ဂတို့အကြား အပြုသဘောဆောင်သည့် ပံ့ပိုးမှုများဖြင့် ပေါင်းကူးဆောင်ရွက်ပေးရန် မျှော်လင့်ကြောင်း ပြောကြားသည်။
တွေ့ဆုံပွဲသို့ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးကျော်တင်၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အမြဲတမ်း အတွင်းဝန်ဦးမြင့်သူနှင့် နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာနမှ အဆင့်မြင့်အရာရှိကြီးများ တက်ရောက်ကြသည်။ အလားတူ နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်သည် မွန်းလွဲ ၂ နာရီတွင် ဩစတြေးလျနိုင်ငံ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် ပစိဖိတ်ရေးရာ ဝန်ကြီး အထက်လွှတ်တော်အမတ် The Hon. Concetta Fierravanti-Wells အား အဆိုပါဝန်ကြီးဌာန၌ လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။
ထိုသို့ တွေ့ဆုံစဉ် မြန်မာ-ဩစတြေးလျနှစ်နိုင်ငံ ဆက်ဆံရေးနှင့် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှု တိုးမြှင့်ရေး၊ ဩစတြေးလျနိုင်ငံမှ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်း ရေး၊ ပညာရေးကဏ္ဍအပါအဝင် လူမှုစီးပွားဘ၀ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အထောက်အပံ့ ပေးသွားမည့်ကိစ္စများ၊ ရခိုင်ပြည်နယ်အရေးကိစ္စတွင် အပြုသဘော ပါဝင်ကူညီပေးရေး တို့နှင့် ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
နိုငျငံတျော၏အတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျ ကုလသမဂ်ဂအတှငျးရေးမှူးခြုပျ၏ မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာအထူးကိုယျစားလှယျ နှငျ့ ဩစတွေးလနြိုငျငံ အပွညျပွညျဆိုငျရာ ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျရေးနှငျ့ ပစိဖိတျရေးရာ ဝနျကွီး အထကျလှတျတျောအမတျ တို့အား သီးခွားစီ လကျခံတှဆေုံ့
နိုငျငံတျော၏အတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျ၊ နိုငျငံခွားရေးဝနျကွီးဌာန ပွညျထောငျစု ဝနျကွီး ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျသညျ ကုလသမဂ်ဂ အတှငျးရေးမှူးခြုပျ၏ မွနျမာ နိုငျငံဆိုငျရာ အထူးကိုယျစားလှယျ Ms. Christine Schraner Burgener အား ယနနေံ့နကျ ၁၀ နာရီတှငျ နပွေညျတျောရှိ နိုငျငံခွားရေး ဝနျကွီးဌာန၌ လကျခံ တှဆေုံ့သညျ။
ထိုသို့ တှဆေုံ့စဉျ နိုငျငံတျော၏အတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျနှငျ့ အထူးကိုယျစား လှယျတို့သညျ ရခိုငျပွညျနယျအရေး အပါအဝငျ မွနျမာနိုငျငံတှငျ ရငျဆိုငျနရေသော စိနျချေါမှုမြားကို ဖွရှေငျးရေးတှငျ မွနျမာအစိုးရနှငျ့ ကုလသမဂ်ဂအတှငျးရေးမှူး ခြုပျ၏ အထူးကိုယျစားလှယျ ရုံးတို့အကွား ပူးပေါငျးဆောငျရှကျမှုမြား၊ အမြိုးသား ပွနျလညျသငျ့မွတျရေးနှငျ့ ငွိမျးခမျြးရေး လုပျငနျးစဉျတို့နှငျ့ စပျလဉျြး၍ မွနျမာ အစိုးရ၏ ကွိုးပမျးအားထုတျမှုမြားအပျေါ အမွငျခငျြးဖလှယျဆှေးနှေးခဲ့ကွသညျ။
ထို့နောကျ အထူးကိုယျစားလှယျက ခရီးစဉျလာရောကျခွငျးမှာ ရခိုငျပွညျနယျ ကိစ်စ ဖွရှေငျးရေးတှငျ မွနျမာနိုငျငံနှငျ့ ကုလသမဂ်ဂအကွား အပွုသဘောဆောငျသညျ့ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျမှုမြား တိုးမွှငျ့နိုငျရနျအတှကျ ညှိနှိုငျးဆောငျရှကျပေးရနျ ဖွဈကွောငျး၊ အသိုကျအဝနျးနှဈခုအား ပိုမိုနီးကပျလာစရေနျနှငျ့ မွနျမာနိုငျငံ၏ ငွိမျးခမျြးရေးလုပျငနျးစဉျတို့အား အထောကျအကူပွုရနျ ဖွဈကွောငျးပွောကွား သညျ။
ယငျးနောကျ နိုငျငံတျော၏အတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျက မွပွေငျအခွအေနနှေငျ့ နကျနဲရှုပျ​ထှေးမှုမြား၏ ပကတိအခွအေနမြေားကို သိရှိနားလညျပွီး အမှနျတရား ဘကျမှ ရပျတညျရနျ အခွအေနမှေနျမြားကို နိုငျငံတကာအသိုကျအဝနျးက သိရှိနိုငျ စရေနျအတှကျ ဆောငျရှကျပေးနိုငျရနျ လိုအပျကွောငျး၊ အထူးကိုယျစားလှယျအနေ ဖွငျ့ မွနျမာနိုငျငံနှငျ့ ကုလသမဂ်ဂတို့အကွား အပွုသဘောဆောငျသညျ့ ပံ့ပိုးမှုမြားဖွငျ့ ပေါငျးကူးဆောငျရှကျပေးရနျ မြှျောလငျ့ကွောငျး ပွောကွားသညျ။
တှဆေုံ့ပှဲသို့ အပွညျပွညျဆိုငျရာ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျရေးဝနျကွီးဌာန၊ ပွညျထောငျစုဝနျကွီး ဦးကြျောတငျ၊ နိုငျငံခွားရေးဝနျကွီးဌာန၊ အမွဲတမျး အတှငျးဝနျဦးမွငျ့သူနှငျ့ နိုငျငံခွားရေး ဝနျကွီးဌာနမှ အဆငျ့မွငျ့အရာရှိကွီးမြား တကျရောကျကွသညျ။
အလားတူ နိုငျငံတျော၏အတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျသညျ မှနျးလှဲ ၂ နာရီတှငျ ဩစတွေးလနြိုငျငံ အပွညျပွညျဆိုငျရာ ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျရေးနှငျ့ ပစိဖိတျရေးရာ ဝနျကွီး အထကျလှတျတျောအမတျ The Hon. Concetta Fierravanti-Wells အား အဆိုပါဝနျကွီးဌာန၌ လကျခံတှဆေုံ့သညျ။
ထိုသို့ တှဆေုံ့စဉျ မွနျမာ-ဩစတွေးလနြှဈနိုငျငံ ဆကျဆံရေးနှငျ့ ပူးပေါငျး ဆောငျရှကျမှု တိုးမွှငျ့ရေး၊ ဩစတွေးလနြိုငျငံမှ မွနျမာနိုငျငံ၏ ပွညျတှငျးငွိမျးခမျြး ရေး၊ ပညာရေးကဏ်ဍအပါအဝငျ လူမှုစီးပှားဘ၀ ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျရေးအတှကျ အထောကျအပံ့ ပေးသှားမညျ့ကိစ်စမြား၊ ရခိုငျပွညျနယျအရေးကိစ်စတှငျ အပွုသဘော ပါဝငျကူညီပေးရေး တို့နှငျ့ ပတျသကျ၍ ဆှေးနှေးခဲ့ကွသညျ။
နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား ဂျပန်နိုင်ငံ NHK သတင်းဌာနက သီးသန့်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်း